张彩花 (@K-Htet)'s conversations - Wattpad
Apr 01, 2021 04:34PM
လိုငျးတှဖွေတျမယျပွောနတေယျ ကိုယျ့ကိုယျကိုဂရုစိုကျကွပါ။ ကိုယျ့ရဲ့ Update တှမေမွငျရငျလညျး မမေ့သှားပါနဲ့အုံး အစအဆုံးတာဝနျယူတတျတဲ့ အထကျလေးမို့ Novel Tran တှမေပွီးမှာတော့ မပူကွပါနဲ့ရှငျ့။ ဟိုလူကွီး ခှေးကြ ဝကျကြ ကတြော့မှပဲ အတိုးနဲ့အရငျးပေါငျးပွီး စာတှပွေနျရေးပေးပါ့မယျ။ လကျမလြော့ကွပါနဲ့ ဖိုကျတငျး။
လိုင်းတွေဖြတ်မယ်ပြောနေတယ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂရုစိုက်ကြပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ Update တွေမမြင်ရင်လည်း မေ့မသွားပါနဲ့အုံး အစအဆုံးတာဝန်ယူတတ်တဲ့ အထက်လေးမို့ Novel Tran တွေမပြီးမှာတော့ မပူကြပါနဲ့ရှင့်။ ဟိုလူကြီး ခွေးကျ ဝက်ကျ ကျတော့မှပဲ အတိုးနဲ့အရင်းပေါင်းပြီး စာတွေပြန်ရေးပေးပါ့မယ်။ လက်မလျော့ကြပါနဲ့ ဖိုက်တင်း။
ရေးလကျစ Novel တှအေကုနျ ပွနျတငျမှာပါနျော ၊ အကုနျအဆုံးထိရေးသှားမှာပါ
ရေးလက်စ Novel တွေအကုန် ပြန်တင်မှာပါနော် ၊ အကုန်အဆုံးထိရေးသွားမှာပါ
သာသာ​ရေ ကျွန်​​တော့်​မိန်းမဇာတ်​လမ်းမှာ ဝမ်​​ဟောင်​တို့အတွဲကျ တုံးတိကြီး  extra​တွေဘာ​တွေရှိ​နေတာလား သူတို့အတွဲဘာဖြစ်​သွားမလဲသိချင်​​နေတာ အဆုံးထိသူတို့အ​ကြောင်းကပါမလာဘူး
@ZuZu442 သူတို့​အ​ကြောင်းလည်းဖတ်​ချင်​​သေးတာကို မ​​ရေး​တော့လည်းမတတ်​နိုင်​ဘူး​ပေါ့ အမ​ရဲ့အခြားဝတ္ထု​တွေလည်းဖတ်​​နေတယ်​ အရမ်း​ကောင်းတယ်​
@ZuZu442 Extra မရှိဘူးရယ် ၊ ဝမ်ဟောင်နိုင်ငံခြားကပြန်လာပြီးထဲက ကျန်းယန်နဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်နေတာပါပဲ ကျန်တာတော့မပါဘူးရှင့်။ ဆရာမကနောက် Novel အနေနဲ့ဆက်ရေးမရေးတော့မသိဘူးရယ်။ အဲ့စာရေးဆရာရေးတဲ့ Novel ကတစ်ခုပဲတွေ့တယ်။
ဒီနကေ့စ အကျပုဒိတျတှကြေဲပါမယျ တငျခငျြစိတျမရှိလို့ပါ။ မနကေ့တငျပေးတယျဆိုတာကလညျး ဟိုးနကေ့ကွိုရေးထားပွီးသားမို့လို့ပါ။ အခုတော့ဘာမှရေးထားတာလညျးမရှိတော့ဘဲ ရေးခငျြစိတျလညျးရှိမနတေော့လို့ပါ။ ပွနျတော့တငျပါ့မယျ ကွာတော့ကွာပါ့မယျ။ အားလုံးပဲဂရုစိုကျကွပါရှငျ့။ ဖွဈနိုငျရငျ အားတကျသရောနဲ့ Civil Disobedience ငွိမျသကျစှာဆန်ဒပွခွငျးကိုဝိုငျးဝနျးကူညီပေးကွပါအုံးရှငျ့။
ဒီနေ့ကစ အက်ပုဒိတ်တွေကျဲပါမယ် တင်ချင်စိတ်မရှိလို့ပါ။ မနေ့ကတင်ပေးတယ်ဆိုတာကလည်း ဟိုးနေ့ကကြိုရေးထားပြီးသားမို့လို့ပါ။ အခုတော့ဘာမှရေးထားတာလည်းမရှိတော့ဘဲ ရေးချင်စိတ်လည်းရှိမနေတော့လို့ပါ။ ပြန်တော့တင်ပါ့မယ် ကြာတော့ကြာပါ့မယ်။ အားလုံးပဲဂရုစိုက်ကြပါရှင့်။ ဖြစ်နိုင်ရင် အားတက်သရောနဲ့ Civil Disobedience ငြိမ်သက်စွာဆန္ဒပြခြင်းကိုဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြပါအုံးရှင့်။
@K-Htet ဟုတျကဲ့ Civil disobedience ကို လုပျပေးတဲ့သူတှအေားလုံးကို ကြေးဇူးတငျနမှောပါရှငျ
@K-Htet. ဟုတ်ကဲ့သာသာ ❤❤❤
ဟယျလို့ဒို့သိခငျြတာ‌လေးမေးစရာလေးခငျြလို့ပါ ဒို့က1997 bornပါဘယျလိုချေါရမှနျးမသိလို့မမလို့ချေါလိုကျမယျနျော မမK-Htetနဲ့မမ Kay-Wineနဲ့ဘာတှလေဲဟငျ ဘာညာဘညာတှလေား GFဆိုလို့လဟေိဟိ♡
@K-Htet အိုငျကြ အမ kay wine ကလညျးကွညောပေး description မှာလညျး gf လို့ရေးထားတော့ အမကို ကောငျလေးမှတျနတော နောကျကြ announcement တမှော ရှငျ့ လို့သုံးတော့ aww.. GL မှတျလို့  ခုမှရှငျးတော့တယျ
Btw ဝမျရှောငျမယျြလေးစောငျ့နခေဲ့တာ thanks for come back! ! !
@Nwayoongl ထငျလညျးထငျခငျြစရာဖွဈနလေို့ပါ heee.... ဒီတိုငျးအမကေ ကိုစနောကျချေါတာပါရှငျ haha ♥
ကြိုးတုတို့ကို စာလုံးပေါငျးတှပွေနျစဈပေးခငျြပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လို့ ငပငျြးကွီးကနြမေိလို့ ​နောကျမှဖွညျးဖွညျးခငျြးပွငျပေးပါ့မယျရှငျ။ ကြိုးတုတို့ Complete ထားတာကလညျးမကွာသေးတော့ အနားယူအုံးမယျရှငျ့။ ခေါငျးတလားကွီးစုံတှဲဖတျနကွေတဲ့လူတှေ ခဏစောငျ့ပေးပါအုံး။
ကျိုးတုတို့ကို စာလုံးပေါင်းတွေပြန်စစ်ပေးချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လို့ ငပျင်းကြီးကျနေမိလို့ ​နောက်မှဖြည်းဖြည်းချင်းပြင်ပေးပါ့မယ်ရှင်။ ကျိုးတုတို့ Complete ထားတာကလည်းမကြာသေးတော့ အနားယူအုံးမယ်ရှင့်။ ခေါင်းတလားကြီးစုံတွဲဖတ်နေကြတဲ့လူတွေ ခဏစောင့်ပေးပါအုံး။
@K-Htet ok kha
Hey! ဒို့စာမြှားခြိတျမှာ acc ဖှငျ့လိုကျပွီ K_Htet ဆိုတဲ့နာမညျနဲ့ပဲနျော Follow လေးလုပျပေးကွပါအုံး ♥
Hey! ဒို့စာမျှားချိတ်မှာ acc ဖွင့်လိုက်ပြီ K_Htet ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပဲနော် Follow လေးလုပ်ပေးကြပါအုံး ♥
@Kay_Wine အမကိုလညျးတှပွေီ့းသှားပွီ ♥♥
@K-Htet ဗိုလျခြုပျကွီး ဒါမှမဟုတျ နတျဆိုးဘုရငျကွီးဆို ရှာလို့ရပွီ ညီမကိုတောငျ followပွီးသှားပွီ
ခေါငျးတလားကွီးထဲမှာ မငျးနဲ့ငါ က ဆကျတငျမှာပါရှငျ့။ အမကေ ကကိုယျ့ကိုစောငျ့ပေးနတောပါ။ ကိုယျ ကြိုးတုတို့ ပွီးတော့မှာမို့အပွတျဖွတျခငျြတယျလို့ပွောထားလို့ပါ။ ကိုယျလညျးမအားတာနဲ့ စာလညျးသိပျမရေးဖွဈတာနဲ့မို့ ကြိုးတုလညျးမပွီးသေးဘဲ ဝမျရှောငျးမိနျတို့ကိုလညျးနားထားရတာပါ။ အမ @Kay_Wine ကိုလညျးတကယျအားနာရပါတယျ။ အမရေ ခဈြတယျရှငျ့။
ခေါင်းတလားကြီးထဲမှာ မင်းနဲ့ငါ က ဆက်တင်မှာပါရှင့်။ အမကေ ကကိုယ့်ကိုစောင့်ပေးနေတာပါ။ ကိုယ် ကျိုးတုတို့ ပြီးတော့မှာမို့အပြတ်ဖြတ်ချင်တယ်လို့ပြောထားလို့ပါ။ ကိုယ်လည်းမအားတာနဲ့ စာလည်းသိပ်မရေးဖြစ်တာနဲ့မို့ ကျိုးတုလည်းမပြီးသေးဘဲ ဝမ်ရှောင်းမိန်တို့ကိုလည်းနားထားရတာပါ။ အမ @Kay_Wine ကိုလည်းတကယ်အားနာရပါတယ်။ အမရေ ချစ်တယ်ရှင့်။
@K-Htet love u too pr naw ( ˘ ³˘)♥
@K-Htet ယေးးးးးးး မျှော်နေမယ်နော် မြင်းခွာတွေကိုင်pစောင့်နေတယ်